Mammography in Columbus, OH | Caafimaadka PW
Mammography ee Columbus, OH
Waa maxay Mammografi?
Mammografi waa nooc raajo ah. Nidaamku wuxuu ku lug leeyahay gudbinta shucaaca hooseeya ee unugyada naaska. Habkani waa hab wanaagsan oo lagu ogaan karo korriinka ka hor intaanay weynayn in la ogaado inta lagu jiro baaritaanka naasahaaga. Koriimo badan ayaa adag in la dareemo sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay qoto dheer yihiin unugyada naaska. Nasiib wanaag, kooxda khabiirada ee Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka ee Columbus, OH, waxay si aad ah ugu tababbaran yihiin isticmaalka mammograms si ay u aqoonsadaan xitaa calaamadaha ugu horreeya ee kansarka naasaha. Koriinka hore waa la helaa, way fududahay in la daweeyo. Baaritaankaan waxaa loo dalban karaa qalab baaris ahaan ama haddii korriin la helay intii lagu jiray baaritaanka jirka.
1 Dib-u-eegista Habka
Miyay tahay in la iga saaro raajo?
Kulliyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Dhallaanka iyo Dhakhaatiirta Haweenka waxay kula talinayaan haweenka da'doodu tahay 40 iyo wixii ka weyn inay qaataan raajada naasaha sannad kasta. Dumarka oo dhan waxay u baahan yihiin in la saaro raajada naasaha iyada oo aan loo eegin cabbirka naasaha, haddii la rakibay iyo in kale, ama haddii naaska laga dhimay iyo in kale. Bixiyahaagu waxa laga yaabaa inuu kugula taliyo raajada naasaha wakhti hore haddii aad leedahay arrimo halis ah. Arrimahan halista ah waxaa ka mid ah bukaannada qaba:
Walaal, hooyo, ama gabadh uu ku dhacay kansarka naasaha
Waxa uu hore u lahaa kansarka naasaha
Waligaa caruur ma dhalin
La kulmay caadada hore
Caado-dayska oo soo daaha
Koritaan aan la garanayn ama meel dhumuc leh oo ku taal unugyada naaska ama kilkisha
Nooc kasta oo dheecaan aan caadi ahayn oo ka yimaada naaska
Isbeddel dhawaan ku yimid sifooyinka ibta naaska ama maqaarka naaska
Sidee loo sameeyaa raajada naasaha?
Kahor intaadan jadwal u samayn raajada raajada, waxa jira dhawr waxyaalood oo ay tahay inaad ogaato:
Shirkaddaada caymisku waxay ogolaan doontaa baarista mammogram sannadkii hal mar. Medicare waxa ay ogolaataa hal kaliya labadii sanaba mar.
Haddii aad leedahay maqaar-galeyaal, fadlan noo soo sheeg marka aad ballanta qabsanayso.
Haddii aad dhibaato buro ama naas ah leedahay, fadlan booqasho u samee daryeel bixiyahaaga halkii aad ka heli lahayd mammogram.
Qorshee inaad xidhato maro laba qaybood ah. Timahaaga dib uga soo celi wejigaaga si aad uga fogaato waxyaabaha timaha ku jira filimka. Intaa waxaa dheer, u diyaargarow inaad iska saarto hilqado kasta oo sudhan.
Ka fogow suufka, looshannada, iyo budada cududda hoosteeda iyo naasaha ka hor inta aan la samayn raajada raajada.
Waxaad yareyn kartaa khatarta ah inaad la kulanto xanuunka inta lagu jiro mammogram-ka adiga oo qaadanaya kaniiniga ibuprofen ama acetaminophen laba saacadood ka hor ballantaada.
Waa in aad baabi'isaa ama aad si weyn u yareeysaa cabbitaannada kafeega leh iyo shukulaatada 5-7 maalmood ka hor ballantaada.
U diyaargarow inaad keento natiijooyinkii raajada raajada ee ballantaada haddii lagu sameeyay xarun kale. Haddi ay taasi suurtogal noqon waydo, waxa lama huraan ah in aad haysato magaca, ciwaanka, iyo talefanka xarunta hore, si aanu noogu soo dirno.
Marka ballantaada la qabto, waxaad booqan doontaa xafiiskayaga Columbus, OH, si aad u hesho raajadaada. Inta lagu jiro ballanta, naaskaaga waxa la dhigayaa inta u dhaxaysa laba saxan oo ku xidhan raajo. Cadaadiskan naasku wuxuu naaska u beddelaa lakabyo khafiif ah oo unug ah, taasoo u oggolaanaysa raajadu inay hesho baadhis sax ah.
Waxaa jira laba nooc oo raajada naasaha ah: baaritaanka iyo ogaanshaha. Mammogram-ka baarista ayaa la sameeyaa si loo ogaado dhibaatada goor hore, xitaa marka bukaanku uusan lahayn calaamado arrin ah. Tani waxay awood u leedahay in ay ogaato burooyinka ama burooyinka aan la dareemi karin, iyo sidoo kale kayd yar oo calcium ah, taas oo calaamad u noqon karta kansarka naasaha. Mammogram-ka ogaanshaha, dhanka kale,, ayaa la dalbadaa marka bixiyaha uu ogaado dhibaato, sida buro ama calaamado kale oo kansarka naasaha ah. Noocan naasuhu wuxuu qaadan doonaa wax ka badan raajada baadhista maadaama ay tahay in raajo badan la sameeyo si loo ogaado wixii dhibaato ah.
Waa maxay MammoPad?
PWH waxay siisaa bukaanka xulashada MammoPad®, barkinta naaska oo hal mar la isticmaalo sida dusha jilicsan oo diiran oo dusha ka ilaalinaysa inta u dhexeysa naaskaaga iyo mashiinka naaska. Tani waxay si weyn u kordhin doontaa raaxada baaritaankaaga caadiga ah ee mammogram.
MammoPad® waxa ansixisay FDA, afartii haweenba saddex ka mid ah waxay soo sheegaan hoos u dhaca raaxo la'aanta 50%. Waxaa jira $10.00 khidmad ah Mammopad®, oo la bixiyo wakhtiga adeegga. Caymiska ma daboolo alaabtan. Waxaad wax badan oo ku saabsan MammoPad® ka baran kartaa www.mammopad.com.
Raajooyinku caadi ahaan ma dhaawacaan, laakiin waxaa laga yaabaa inaad dareento xoogaa raaxo ah marka naaskaagu la cadaadiyo inta lagu jiro baaritaanka. Haweenka qaar ayaa sheegaya in ay dareemayso in xusul lagu cadaadiyo naaska. Haddii aad ka walaacsan tahay xanuunka, weydii xubin ka mid ah kooxdayada wax ku saabsan samaynta raajadaada MammoPad. Waxaan ku dadaaleynaa inaan khibradaada ka dhigno mid raaxo leh intii suurtagal ah.
Intee in le'eg ayay qaadataa raajada naasaha?
Mammogram-ka laftiisa waa inuusan qaadan waqti dheer, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad waqti ku kordhiso si aad u hubiso, u beddelato gown, oo aad sugto natiijada naasaha naasaha. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay ku talinayaan inaad qorsheysato ugu yaraan hal saac marka aad ballansanayso ballankaaga mammogram. Kooxdayadu waxay ka shaqayn doonaan inay yareeyaan wakhtiga sugitaannada si aad ugu soo noqoto maalintaada sida ugu dhakhsaha badan.
Maxaa dhacaya haddii la helo cillad aan caadi ahayn?
Haddii wax la helo inta lagu jiro ballanta naasaha, waxay u badan tahay in laguugu yeero baaritaan dheeraad ah. Taas macnaheedu maaha inaad qabto kansarka naasaha, laakiin qiimayn dheeraad ah ayaa loo baahan yahay. Shaqaalaheena tababaran ee Columbus, OH, ayaa kula shaqeyn doona si loo go'aamiyo habka ugu wanaagsan ee ficilka. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato adeegyo sawir-qaadis oo dheeri ah si aad aragti fiican uga hesho cilladda.
Aqoonso Calaamadaha Kansarka Naasaha
Marka goor hore la ogaado, kansarka naasaha waxay aad ugu dhowdahay in si guul leh loo daweeyo. Iyadoo raajada mammogaraafka ay dumarka qaarkood ka dhigi karaan kuwo aan raaxo lahayn, waxay aad lagama maarmaan u yihiin hubinta sii socotada caafimaadkaaga guud. La xidhiidh Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka maanta si aad u ballansato raajadaada xafiiskayaga Columbus, OH.
Waa maxay MammoPad®, oo Miyay Raaxo ku Kordhin Doontaa Mammogram-kayga?
Baarista kansarku waa lama huraan laakiin waxay keeni kartaa xoogaa murugo ah. Baro MammoPad iyo sida ay uga dhigto ogaanshaha kansarka naasaha mid aad u raaxo badan.
Goorma ayay tahay inay Dumarku Bilaabaan Qaadashada Mammograms?
Raajadu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah baadhista kansarka naasaha ee haweenka ka weyn 40. Eeg cidda u sharaxan naasaha OBGYN ee Columbus.